एजेन्सी । यदि तपाईलाई प्रश्न गरियो कि एक मिनेटमा तपाई के–के गर्न सक्नुहुन्छ ? यसको उत्तर के हुन्छ तपाईको ? तपाईले भन्न सक्नुहोला म १० म्यासेज पठाउन सक्छु या १०० मिटर दौडन सक्छु । तर सोँच्नुहोस् यही काम यदि विश्वभरमा लाखौं मानिसहरु एकैसाथ गरेमा के होला ?
आज हामी यसै सन्दर्भमा चर्चा गर्छौं कि एक मिनेटमा इन्टरनेटको क्षेत्रमा विश्वभर के–के हुन्छ ? डाटा एनालिस्ट कम्पनी ‘डोमो’ले यसको सुची सार्वजनिक गरेको छ कि एक मिनेटमा इन्टरनेटमा के–के हुन्छ ।
एक मिनेटमा व्हाट्सएपमा ४.१ करोड म्यासेजहरु पठाइन्छ । व्हाट्सएप सबैभन्दा व्यस्त नयाँ वर्षको बेलुका हुने गर्दछ । यसै वर्ष व्हाट्सएपले एक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो जसअनुसार नव वर्ष २०२० को पूर्व सन्ध्यामा पुरा विश्वमा १०० अर्ब व्हाट्सएप म्यासेज पठाइएको थियाे । जसमध्ये २० अर्ब म्यासेज भारतबाट पठाइएको आँकडा थियो ।
युट्युबको बारेमा तपाईलाई थाहा नै छ । तर यो जानकारी सुन्दा तपाई अचम्ममा पर्न सक्नुहुन्छ कि युट्युबमा एक मिनेटमा ४५ लाख भिडियो हेरिन्छ । यसका साथै मानिसहरु गीत सुन्नका लागि पनि युट्युबको प्रयोग गर्दछन् ।
गुगलको सर्च इञ्जिनलाई विश्वको बादशाह पनि भन्ने गरिन्छ । किनभने आजसम्म यस्तो कुनै सर्च इञ्जिन पैदा भएको छैन जसले गुगललाई पछि पारेको छ । गुगलमा एक मिनेटमा ३८ लाख सर्च गरिन्छ ।
फेसबुकमा हरेक मिनेट १० लाख मानिसहरु ‘लग ईन’ गर्दछन् । तपाई अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कि हरेक मिनेटमा १० लाख मानिसलाई सम्हाल्नका लागि कति ठूलो सर्भरको आवश्यकता पर्दछ ।
इन्स्टाग्राममा हरेक मिनेट २ लाख ७७ हजार ७ सय ७७ तस्बिरहरु अपलोड हुन्छन् । जानकारीका लागि, इन्स्टाग्रामलाई सन् २०१२ मा फेसबुकले किनेको थियो ।
गुगल प्ले र एप्पलको एप स्टोरमा हरेक मिनेटमा ३ लाख ९० हजार एपहरु डाउनलोड हुन्छन् । जसमा हरेक प्रकारका एपहरु रहेका छन् ।
ट्विटरमा एक मिनेटमा ५ लाख ११ हजार २ सय ट्विट गरिन्छ । सबैभन्दा बढी ट्विट देश तथा विदेशमा चर्चामा रहेको सामाजिक मुद्धा तथा ह्यासट्यागको साथमा हुने गर्दछ ।
हरेक मिनेटमा नेटफ्लिक्समा कुल ६ लाख ९४ हजार ४ सय ४४ भिडियो हेरिन्छ ।
अनलाइन शपिङमा एक मिनेटमा मानिसहरु १० लाख डलर खर्च गर्दछन् । यी अनलाइन शपिङ साइट अमेजन, फिलप्कार्ट र इबे रहेका छन् ।
जिफीमा एक मिनेटमा ४८ लाख जिफ बनाइन्छ , व्हाट्सएपमा जिफको सपोर्ट भएसँगै जिफीको लोकप्रियता बढ्दो छ । जिफ पाइल एक मिडिया फाइल हो जसमा कुनै अडियो हुँदैन ।